‘हिन्दूराष्ट्र’ कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको मुख्य एजेण्डा
पोखरा । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औं महाधिवेशनबाट हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनाको प्रस्ताव पारित हुने नेताहरुले बताएका छन् । पोखरामा आयोजित हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा नेताहरुले देशलाई जोगाउन र कांग्रेसले आफूलाई राष्ट्रवादी पार्टी हो भन्ने सिद्ध गर्नका लागि हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सधै वीपीको नाम बेचेरे खाने गरिएको भन्दै नेता भण्डारीले आक्रोश व्यक्त गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘वीपीले कहाँ धर्म निरपेक्षता र संघीयता भनेका छन् ?’ धर्म र संस्कार बिर्सिदा पार्टीमा अनुशासन, मर्यादा र जिम्मेवारीपन हराउँदै गएको नेता भण्डारीले बताए ।
भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सन्तमहन्त, योगी र जोगीहरुको भूमिकालाई नबिर्सन नेता भण्डारीले आग्रह गरे । उनले भने, ‘दलाई लामाका केही एजेन्टहरु नेपालको संविधान बन्ने क्रममा सल्बलाएका थिए । यिनै एजेन्टहरु नेपालको सनातनी हिन्दू संस्कार र संस्कृति मास्न उद्धत छन् ।’
धर्म, संस्कार, संस्कृति र राष्ट्रका लागि आफूले जस्तोसुकै बलिदानी दिन पनि तयार रहेको पूर्व मन्त्रीसमेत रहका नेता भण्डारीले उद्घोष गरे ।
अर्का नेता देवेन्द्रराज कंडेलले सनातन हिन्दूराष्ट्रलाई रातारात अपहरण गरिएको भन्दै यो कुरा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई चित्त नबुझेको बताए ।
धर्म, संस्कार र संस्कृति जोगाउने हो भने राष्ट्रमा कुनै संकट नआउने भन्दै उनले अब कांग्रेसले जनताको साथ लिएर हिन्दूराष्ट्रकै पक्षमा उभिने स्पष्ट पारे ।
जनभावना कदर गर्न नसक्ने हो भने कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हुन नसक्ने जिकिर गर्दै नेता कंडेलले पार्टीको अबको प्राथमिकता हिन्दूराष्ट्र नै भएको स्पष्ट पारे ।
उनले कुर्ची हल्लिन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भगवान पशुपतिनाथको शरणमा पुगेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीको नाटकमात्र हो । हिन्दूको भावनामाथि खेल्ने प्रयत्न गरेका हुन् ।’
हिन्दूराष्ट्रका लागि अबको एकमात्र विकल्प भनेको जनमत संग्रह नै भएको उनको जिकिर छ ।
सनातन हिन्दूराष्ट्रका लागि एकतावद्ध हुन आवश्यक रहेको भन्दै नेता कंडेलले कतैकतैबाट राजासहितको हिन्दूराष्ट्रको आवाज उठाइएकोले यो सम्भव नभएको ठोकुवा गरे । नेपाली कांग्रेसका नेता शुक्रराज शर्माले मुखले धेरैले हिन्दू हुँ भन्ने गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
धर्म सापेक्ष मुलुकका लागि कांग्रेस अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको भन्दै नेता शर्माले हिजो राजा हुँदा हिन्दूराष्ट्र हुने तर राजा नहुँदैमा धर्म निरपेक्ष हुनु बिडम्वना भएको बताए ।
कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको मुख्य मुद्धा हिन्दूराष्ट्र नै हुनुपर्ने भन्दै नेता शर्माले यसका लागि दह्रोसंग उभिन नेताहरुलाई आग्रह गरे ।
हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना महाअभियान पोखराबाट शुरु
विश्व हिन्दू महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. रामचन्द्र अधिकारीले हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना महाअभियान पोखराबाट शुरु भएको घोषणा गरे । यो अभियान देशव्यापी हुने र कांग्रेसमात्र होइन सबै पार्टीसंग हिन्दूराष्ट्रबारे धारणा बुझ्ने बताए ।
सबै ओमकार परिवारलाई एकतावद्ध र गोलबन्द गर्दै हिन्दूराष्ट्र घोषणा गरेरै छाड्ने उनले उद्घोष गरे । उनले भने, ‘हाम्रो एकमात्र उद्देश्य भनेको नेपालको संविधानमा ‘धर्म निरपेक्ष मुलुक’ लेखिएको छ, उक्त स्थानमा ‘धर्म सापेक्ष मुलुक’ भनेर सच्याउने हो ।’
सम्भव छ हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना ?
यस विषयमा पनि नेताहरुले बोलेका छन् । नेता शंकर भण्डारी भन्छन्, ‘बोल्न जति सजिलो छँदै छैन । निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण छ ।’ तर जनजनको मनमा हिन्दूराष्ट्र रहेकाले जनताले नै यसको फैसला गर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे ।
हिन्दूराष्ट्रको नारा निकै घोक्दै आएका कमल थापाले मन्त्री बनेपछि सबै बिर्सिएको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामीले उहाँ (कमल थापा) बाट धेरै आशा गरेका थियौं । संविधानसभामा हिन्दूराष्ट्रकै नारा बोकेर २५ सिट जित्नुभो । मन्त्री बन्नुभो । सबै भुल्नुभो ।’ उनले हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा उभिने नेतालाई मात्रै अबको पार्टी सभापति बनाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
अर्का नेता देवेन्द्रराज कंडेलले हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना भनेजस्तो सहज नभएको बताए । उनले भने, ‘हिन्दूराष्ट्र भनेजस्तो सजिलो छैन। कठिन निकै चुनौतीपूर्ण छ । पार्टीको नेतृत्व तहमा बसेकाहरुले यो कुरा महशुश गरेका छैनन् ।’
#नेपाली कांग्रेस #धर्म संस्कृति